हलिउड फिल्म 'जुमान्जी ४' बन्दै, दि रकले मागे ५ सय ५५ करोड पारिश्रमिक Canada Nepal
हलिउड फिल्म 'जुमान्जी ४' बन्दै, दि रकले मागे ५ सय ५५ करोड पारिश्रमिक
काठमाडौं - हलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् ड्वेन जोहन्सन अर्थात दि रक । पुर्व रेसलर समेत रहेका दि रक विश्वकै सबैभन्दा महँगा कलाकार पनि हुन् ।
हरेक बर्ष बढी पारिश्रमिक बुझ्ने कलाकारमा गनिने दि रकले नयाँ फिल्मको लागि महँगो पारिश्रमिक माग गरेका छन् ।बक्सअफिसमा धमाकेदार कमाई गरेका हलिउड फिल्म जुमान्जी बारे धेरैलाई थाहा नै छ ।
'जुमान्जी : वेलकम टू द जंगल' र 'जुमान्जी : द नेक्स्ट लेभल' ले पनि दर्शकको मन निकै जित्यो । अहिले जुमान्जी को चौथो सिरिज बन्ने तयारीमा छ । यसै फिल्मको लागि दि रकले ५ सय ५५ करोड पारिश्रमिक मागेको बताइएको छ ।
सन् २०२१ को डिसेम्बरमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको यस फिल्ममा दि रकलाई नै अफर गरिएको छ । यसअघिको दुई सिरिजमा उनले कूल २३.५ मिलियन डलर पारिश्रमिक बुझेका थिए ।
पौष २८, २०७७ मंगलवार १३:२७:५७ बजे : प्रकाशित
हलिउड फिल्ममा अभिनय गर्दै नेपालकी अञ्जली लामा
काठमाडौं - नेपाली मोडल अञ्जली लामाले हलिउड फिल्ममा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । भारतमा मोडलिङ गरिरहेकी ट्रान्सजेन्डर अन्जलीले हलिउड फिल्म ‘सेयरिङ अ राइड’मा अभिनय गर्ने भएकी हुन् ।
उनले बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजसँग अभिनय गर्ने बताइएको छ । महिलाको विषयवस्तुमा बन्न लागेको यस फिल्मलाई लीना यादवले निर्देशन गर्न लागेकी छिन् ।
महिला कलाकार मात्र हुने यस फिल्ममार्फत ज्याकलिनले पनि डेब्यु गर्दैछिन् । ६ हिस्सामा बाँडिएको फिल्मको निर्देशन विश्वका अलग निर्देशकले निर्देशन गर्ने बताइएको छ ।
फिल्मको छयांकन इटली, भारत र अमेरिकामा हुनेछ । सन् २०१७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मोडलको रुपमा स्थापित भएकी अञ्जली मुम्बईमै रहेर मोडलिङ गरिरहेकी छिन् ।
माघ १४, २०७७ बुधवार २०:१५:२० बजे : प्रकाशित
# अञ्जली लामा
बर्षाले किन छोडिन् 'सुदुर' ?
काठमाडौं - नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले फिल्म 'सुदुर' छाडेकी छिन् ।
रमेश बुढाथोकीको निर्देशनमा बन्ने यस फिल्ममा वर्षा सिवाकोटीको मूख्य अभिनय रहने बताइएको थियो । तर बर्षाल यस फिल्ममा अभिनय नगर्ने भएकी छिन् ।
फिल्मको छायांकन पटक पटक सारिएपछि बर्षाले फिल्म छाडेको बताइएको छ । उनले डेढ बर्ष अघि यस फिल्ममा साइन गरेकी थिइन् ।
फिल्म छायांकन हुनेमा शंका उत्पन्न भएपछि बर्षाले फिल्ममा अभिनय नगर्ने भएकी हुन् । फिल्मको छायांकन जुम्लामा गर्ने तयारी रहेको छ । अब बर्षा फिल्म परदेशी २ मा प्रकाश सपुतसँग देखिदैछिन् ।
माघ १४, २०७७ बुधवार १३:४०:०८ बजे : प्रकाशित
अब चुप बस्दैनौ भन्दै यसरी आक्रोश पोखे रेखा र मनिषाले, कार्यक्रममै चल्यो रुवाबासी (भिडियो)
काठमाडौं - बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला र नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी अभिनेत्री रेखा थापा पछिल्लो समय सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आवाज उठाउदै आइरहेका यी अभिनेत्री राष्ट्रिय एकता परिषद् मार्फत सामाजिक कामहरु गरिरहेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय एकता परिषद्ले आयोजना गरेको महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रममा मनिषा र रेखा दुवै सहभागी भएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा दुवै अभिनेत्रीले महिला अधिकार सम्बन्धी आआफ्ना धारणाहरु राखेका छन् । भिडियोमा देखाए जस्तै सहभागीले सुनाएका समस्या र पीडा सुनेर मनिषा र रेखाले आशुँ थाम्न सकेनन् । कार्यक्रममा नै उनीहरु निकै भावुक बने ।
बालविवाह अन्त्यको अभियानमा पनि सहभागी रेखाले कार्यक्रममा मेची देखी महाकालीसम्म पुग्दा अनौठा उदाहरण देखेको बताइन् । उनले योगमायालाई अहिलेको अवस्थाको सिर्जना गर्नुमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै प्रशंसा गरिन् ।
माघ १३, २०७७ मंगलवार २२:०६:२७ बजे : प्रकाशित
गीता ढुंगानाले पुष्पलाई भन्दैछिन् 'दिइसके यो जिवन '
काठमाडौँ । नायक तथा मोडल पुष्प खड्का र गीता ढुंगानाको अभिनय रहेको 'दिइसके यो जिवन' बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ ।
गायक एच. बी. सुनार र मन्जु उपासनाको स्वरमा रहेको गीतका शब्द शान्त गोविन्द महर्जनको शब्द र एच. बी. सुनारकोनै संगीत रहेको डान्सिङ शैलीको यस गीतमा साहस शाक्यको एरेन्ज रहेको छ ।
ज्ञानेद्र शर्माको सिनेमाटोग्राफी,सुबोल थापाको कोरियोग्राफी ,रहेको भिडियोमा अमृत चापागाईको सम्पादन र शिशिर श्रेष्ठको निर्देशन रहेको छ ।
प्रेम रोमान्सले भरिएको भिडियोमा निर्माण यूनिटले निकै मेहेनत गरेको देखिन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो
माघ १३, २०७७ मंगलवार २१:२७:३५ बजे : प्रकाशित
# गीता ढुंगाना
पहिलेकी मोटी रेखा अहिले भइन् स्लिम, नयाँ फिल्मका लागि घटाइन् २० किलो तौल
काठमाडौं - नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापा अब नयाँ फिल्मको तयारीमा लागेकी छिन् ।
केही महिनादेखी आफ्नो मोटो शरिर स्लिम बनाउनमा लागेकी रेखाले फिल्मकै लागि तौल घटाएकी छिन् । उनले केही महिनामै २० किलो आफ्नो तौल घटाएकी छिन् ।
पहिलेकी मोटी रेखा अहिले स्लिम भएकी छिन् । निर्देशक तथा निमात्री समेत रहेकी रेखाले अब नयाँ फिल्म बनाउदैछिन् ।
उनले आउँदो बैशाखदेखि होमप्रोडक्सनमा निर्माण हुने फिल्मलाई छायांकनमा लैजाने बताएकी छन् ।
रेखाले आफ्नै निदैशनमा फिल्म निर्माण गर्दैछिन् । उनले एक्सनवाला फिल्म निर्माण गर्ने बताइएको छ । उनले अहिले आफ्नो नयाँ फिल्मका लागि आफुलाई मेन्टेन गरिरहेकी छिन् ।
कोरोना संक्रमणको बेलामा जिम जान जोखिम हुने हुनाले उनले घरमै दैनिक व्यायम गर्दै आइरहेकी छिन् । केही समयदेखी ट्रेनर विज्जु पार्कीसँग अभ्यास गरेका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका थिए ।
माघ १३, २०७७ मंगलवार २०:२९:०१ बजे : प्रकाशित
२६ वर्षको उमेरमा ज्यान गुमाइन् दक्षिण कोरियाकी अभिनेत्री सोङ्ग यू जङ्गले
काठमाडौं - दक्षिण कोरियाकी चर्चित अभिनेत्री तथा मोडल सोङ्ग यू जङ्ग को मृत्यु भएको छ । उनको शनिवार २६ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले जनाएका छन् ।
उनको शनिवार नै परिवारका सदस्यहरुको उपस्थितीमा अन्तिम संस्कार गरिएको जनाइएको छ । सन् २०१३ मा ‘गोल्डन रेन्बो’ बाट अभिनय यात्रा शुरु गरेकी उनको के कारणले मृत्यु भयो भन्ने बारे खुलाइएको छैन ।
उनले धेरै टिभी सिरिज, म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा काम गरेकी थिइन् । उनी दक्षिण कोरियाकै चर्चित मोडलमा गनिएकी थिइन् ।
माघ १३, २०७७ मंगलवार १४:४०:१५ बजे : प्रकाशित
# सोङ्ग यू जङ्ग